Romantic weekend | Partnership Romance | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Romantique faran'ny herinandro ao amin'ny toerana manokana
Romantikan'ny faran'ny herinandro
Ny herinandro farafahakeliny irery dia tokony faran'ny herinandro. Ny fiatombohan'ny asabotsy amin'ny hariva ary sahirana amin'ny tantaran'ny Alatsinainy ho avy ny Alahady tolakandro dia mitondra fahasorenana bebe kokoa noho ny fialan-tsasatra.
Hevitra ho an'ny faran'ny herinandro mahafinaritra
Mahafinaritra raha afaka manomboka ny fetin'ny mpifankatia ianao amin'ny zoma hariva. Avy eo, aloha dia misy ny torimaso alina, raha mbola tianao, amin'ny fandaharana. Ny sakafo maraina eny am-pandriana, angamba amin'ny champagne na champagne, dia tafiditra ao. Noho izany dia nanamafy ianao fa afaka mankafy tanteraka ny Sabotsy ho avy ary mankafy.
Mankalaza amin'ny takarivam-pitiavana
Romantique faran'ny herinandro miaraka amin'ny fampakaram-bady
Noho izany tsy misy zavatra manelingelina ny fitiavana, dia tsara ny tsy mandany ny faran'ny herinandro ao amin'ny rindrina efatra eo an-tokontany. Ny zavatra hitanao foana dia zavatra azonao atao "fotsiny". Ahoana no hialana amin'ny tsora-kazo ary tsy hahita fiadanana.
Ny diany mankany amin'ny faran'ny herinandro mahafinaritra dia tsy voatery ho lavitra. Ao an-tanànanao na tanàna lehibe kokoa dia tena hotely mahafinaritra. Ho an'ireo mponina an-tanàn-dehibe, trano fandraisam-bahiny eny ambanivohitra na tranom-bahiny mampiantrano amoron-dranomasina dia fiovana goavana avy any an-tanàn-dehibe.
Na ny trano fandraisam-bahiny aza dia mety ho indray mandeha. Ao amin'ny trano maro dia misy fandaharana manokana ho an'ny mpivady. Azonao atao ny misafidy amin'ireo karazana fampakaram-bady samihafa izay misy batisan-tsakafo sy fitsaboana hafa ho azy. Ireo fampiharana ireo dia afaka miara-misakafo, na ao amin'ny efitranonao na any amin'ny toeram-pisakafoanana manokana ao amin'ny hotely.
Ao amin'ny Spa tsy misy tsirony ihany no malama ny voninkazo na voankazo izay mety kokoa ny vehivavy, fa koa ana-panahy ataony toy ny mandro ao amin'ny labiera VAT scrubs amin'ny tsaoka na sira-tantely mifangaro ny olona tena tia.
Raha betsaka ny asa atao any amin'ny hotely, dia mety tsy te hijanona ao amin'ny hotely fisakafoanana ianao amin'ny fotoana malalaka. Ahoana ny momba ny faran'ny herinandro mahafinaritra amin'ny igloo? Voafandrika ao anaty mofomamy malefaka, mahafinaritra erỳ any. Ny igloos dia marevaka marevaka ary manazava indraindray.
Hevitra iray hafa dia ny faran'ny herinandro ao amin'ny mololo. Hay trano fandraisam-bahiny dia izao misy amin'ny faritra maro. Fandaharana toy izany matetika tonga soa ahitana zava-pisotro, Hofrundgänge, multi-candlelit Mazava ho azy fa sakafo antoandro ary avy eo dia lehibe iray alina ao am-pandriana tao an-manitra anana mololo. Sakafo maraina dia vao avy voaomana eo an-toerana amin'ny alalan'ny sakafo, ary nanompo tao amin'ny fotoana tiany.
Ny faran'ny herinandro faramparany dia niaina tao amin'ny Baumhaushotel. Any amin'ny avo avo, ny trano dia mafy sy matanjaka ary tsy manana fampiononana.
Ny fironana vaovao ho an'ny faran'ny herinandro mahafinaritra dia avy any Etazonia. Efa nisy hotely manokana nandritra ny fotoana maromaro niaraka tamin'ny fitaovana manokana. Ireo efitrano dia voaravaka araka ny lohahevitry ny eroticism. Trano famakiam-bolo ao amin'ny efitrano, kianja lehibe sy kilalao dia misy ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo, izay misy any Alemaina ankehitriny.
Mazava ho azy fa ny fahaiza-miaina dia mahaliana ary ny fahasalamana ara-batana dia mikarakara ny efitrano. Ny trano misy ny rivotra manjelatra dia tsy mamela ny ankizy ho vahiny, noho izany dia afaka miaina marina tokoa ianao fa tsy misy fialantsiny.
Mahatsapa toy ny mpanjaka na ny mpanjakavavy: izany no ataon'ny maro an'isa ao amin'ny lapan'ny hotely. Ao amin'ny trano renivohitry ny renivohitra ianao dia mandany andro sy alina ary mifangaro kulinar araka ny fitsipika rehetra momba ny fahaiza-mikarakara.
Ny faran'ny herinandro mahafinaritra dia tena mahafinaritra ny miala amin'ny sivilizasiona rehetra. Fianakaviana iray na trano fatoriana, trano fatoriana tsara tarehy any amin'ny farihy, amoron-dranomasina na any an-tendrombohitra no manasa anao.
Ho an'ny sakafo ampy sy ny fitaovana feno amin'ny lamba rongony ary ny zavatra hafa rehetra omen'ny tompon'andraikitra. Amin'ireny no anangonanao ny fanalahidin'ny trano ary mandra-pialan'ny fandriam-pahalemana mahafinaritra. Afaka mandany andro ao an-trano na any am-pandriana ianao na mivoaka any amin'ny natiora. Tsy misy telefaona, na ordinatera na solosaina, na TV na radio, ary tsy misy telefaona finday tokony hanelingelina ny firaisana.
Miaraka amin'ny natiora
Fotoana izao handraisana, hiarahana ary hiara-misakafo. Ny fitetezan'ny natiora dia mandondona ny lohanao ary manisy toerana ho an'ny eritreritra sy hevitra vaovao. Mihaino ny feon'ny natiora ianao ary mahatsiaro tena ho velona sy tsara.
Ny faran'ny musical weekend
Ny mozika dia tena antony iray mahatonga ny fanandratana. Ho an'ny faran'ny herinandro faran'ny herinandro, mozika dia afaka mampifandimby hitsidika fampisehoana miaraka amin'ny sakafo matsiro sy fialantsasatra amin'ny alina ao amin'ny hotely tsara tarehy.
Ny hetsika dia mikaroka ny mozika izay ahafahan'ireo mpiara-miombon'antoka mandresy, na zavatra vaovao tsy mbola fantatra hatramin'izao. Mety ho malaza na hitifitra, pop, ary vatolampy izany, izay iainanao any amin'ny faritra misy azy. Na dia ny mozika sy ny tantaram-pitiavana eo amin'ny sehatry ny teatra aza dia tena mifanaraka amin'ny fihetseham-po amam-panahy.
Raha mitranga amin'ny zoma ny hetsika, dia azonao ampiasaina ny asabotsy manaraka amin'ny fomba mahatalanjona amin'ny asa hafa. Ny fitsangatsanganana an-dranomasina amin'ny helikoptera na ao anaty baolina iray eo amin'ny faritra dia zavatra tsy hay hadinoina miaraka.
Ny fitsidihana maharitra ny toeram-pisakafoanana misy alaola sy ny velarantan'ny fialantsasatra ary ny toeram-pitsaboana dia manome azy tsara kokoa amin'ny toetr'andro. Ary na dia fitsangatsanganana fivarotana aza dia mety ho tsara tarehy, raha mitady loboka tsara tarehy erotic, izay manandrana amin'ny takariva amin'ny hotely.